Qaxootiga Soomaalida oo kamid noqday Magangalyo doonka ugu badan ee bilooyinkii lasoo dhaafay iska dhiiba Dalka Britain oo warbixin laga soo saaray.
Ra’iisul wasaaraha Soomaliya Prof Cali Maxamed Geedi oo Maanta kulan kulaleh Nairobi xubnaha besha Hawiye si ay Dowladiisa utaageeraan
Ridwaan Haji - London.
bilooyinkii ugu danbeeyay July ilaa September ee sanadkan 2004 ayaa warbixin ay soo soo saartay Qaybta Statisticska ee Dawladda oo ay weheliyaan immigrationka iyo home officeka waxaa lagu sheegay in dalka ay iska dhiibeen 8,605 magangalyo doon ah .
Tiradan waxaa ay sagaal jeer ka badantahay sadexdii bilood ee kasii horeeyay July oo halka 2003da bilooyinkii July ilaa Septemberna ay tahay 29%, Dalka Soomaaliya oo ka mid ah dalalka Dagaalada sokeeye ay ka jiraan ayaa isna ka mid noqday shanta dal ee warbixintan lagu sheegay oo kala ah Iraniyiin,Chinese, Somali, Zimbabwi iyo ciraaqiyiin.
Dadkaasi magangalyo doonka ah waxaa weheliya caruur fara badan oo la socda iyadoo isla dalka taliyaanigana lagu waramayo in ay jiraan qaxooti badan oo soo gala dalkaasi , waxaana intooda badan ay soo mareen dhanka badda oo marar badan ay ku haligmaan.
49,405 oo magangalyo doon ah ayaa dalbaday qaxootinimo sandkii 2003 , waxaana tiradaasi ay ka hoosaysaa 41% tiradii is dhiibtay sanadkii 2002 oo lagu sheegay sida warbixintu ay qortay 84,130.
Sanadkan waxaa warbixintu ay ku xustay in 90% la aqbali waayay dadka magangalyo doonka ah halka 10% ay isugu jiraan kuwa mudooyin cayiman loo ogolaaday in ay dalka sii joogaan iyo kuwo la siiyay sharciyada dalka lagu joogay ee qaxootiga.
Sharciyada lagu adkaynayo qaxootiga magangalyo doonka ah ee dunida ka yimaada ayaa lagu waramayaa in ay dawladdu uga dan leedahay sidii ay ku hakin lahayd qaxootiga tirada badan ee dalka Britain soo gala, waxaana dhanka kale jira sharciyo cusub oo qaarkood la sheegay in ay dhaqan galeen halka kuwa kalana wali aanay bilaaban dhaqangalkooda.
Maanta oo Arbaca ah waxaa lagu wadaa in wasiirka koowaad ee Soomaaliya Prof Cali Maxamed Geedi la wadaago kulankii ugu danbeeyay Beesha Hawiye.
Wasiirka koowaad ee Soomaaliya Prof Cali Maxamed Geedi waxa uu maalmahan waday kulamo wada tashiyo ah isaga oo ka dhaadhicinaya dadka Soomaaliyeed in ay taageeraan doowladiisa.
Kulamadan kuwoodii ugu horeeyay waxa uu la yeeshay Xubnaha xildhibaanada Soomaaliyed isaga oo maalinki ciida qado sharaf ugu sameeyay Hotelka Intercontoneter ee Magaalada Nairobi.
Xubnahaasi waxa ay balan qaadeen in ay la shaqaynayaan doowlada ayna siinayaan isaga taageero buuxda.
Sidoo kale wasiirku waxa uu kulan la yeeshay beesha Mudulood Hiraab oo iyagu umuujiyay Taageero hiil iyo hooba leh una balan qaaday in ay taageeri doonaan.
Iyagoo isla markiba googol ufidiyay xubnaha kale ee Hiraab ee Habar Gidir iyo Duduble balse beesha Martiile Hiraab ee Shiikhaal iyada wali ma aysan kulmin wasiirka waxaase lagu wadaa in ay maanta kulmaan.
Xubnaha Madarkicis iyo Maxamuud Hiraab waxa ay si dheeli tiran ubalan qaadeen in ay taageerayaan doowlada Prof Cali Maxamed Geedi walibana ay ka dajinayaan Magaalada Muqdisho ayna furayaan Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho iyo Dakada wayn ee Caasimada Soomaaliya.
Hogaamiyaasha kala ah Cusmaan Xasan Cali Caato, Eng Xusseen Maxamed Caydiid Furux, Axmed Ducaale Geele Xaaf Gacmodheere Al Xaaj Muuse Suudi Yalaxow Axmed Diiriye Cawalle ayaa iyagu nidir ku galay in aysan dhinacooda waxba hagraneen ayna soo dhawaynayaan dowlada iyagoo dageenadooda ka hir galin doona in ay doowladu ay fariisimo ka dhigato.
Hadaba kulanka maalinka barito ah lagu wado in u la wadaago Prof Geedi xubnaha kale ee Beesha Hawiye Sida Martiile Hiraab Mursade, Gugundhabe Xawaadle iyo dhamaan beelaha Hawiye ee aysan Raysul Wasaaraha Soomaaliya kulmin waxa uu daba joogaa kulamadii hore ee ku saabsanaa in doowladu ka hir gasho gudaha Soomaaliya gaar ahaan Caasimada wadanka Soomaaliya ee Muqdisho ,
Hadi wasiirka Koowad ee Soomaliya ku guulaysto in ay beesha hawiye taageeraan doowlada ayna raali ku noqdaan qaabka Prof Geedi u soo magacabo Golihiisa Wasiirada ayna saanada hubeed iyo mid dhaqaale ku taageeraan iyagoona rug uga dhigaya doowlada Muqdisho PROF Cali MMaxamed Geedi waa ka badbaadayaa Jidkii ay mareen Cumar Carte Qaalib Cali Khaliif Galayr Xasan Abshir Faaerax Maxamed Cabdi Yuusuf oo dhamaantood Soomaaliya burburkii ka dib ka soo noqday Xilka hada uu hayo Cali Maxamed Geedi o ah wasiirka Koowaad ,